Shina ankizy pirinty boky pirinty amin'ny loham-pianakaviana sy mpanamboatra lamba Fanontana fahalalana
Ankizy manonta boky matevina miaraka amin'ny lohany sy lamba
Anaran'ny vokatra: ny boky pirinty ho an'ny ankizy sy ny lamba sy ny rambony
Fitaovana: taratasy misy coated sy / na taratasy offset, board grey.
MOQ: dika mitovy 300 ho an'ny filaharana mahazatra
Ny orinasa anay dia mpanamboatra pirinty ao Qingdao, CHINA. Miaraka amin'ny traikefa famokarana be dia be mihoatra ny 16000 mahery, afaka manolotra vidiny sy kalitao tsara kokoa ary ambany kokoa ny MOQ.
Ny vidiny bebe kokoa, ny kely kokoa ny vidiny. Matetika ny MOQ dia 500 dia misy kopaka, fa raha afaka manaiky ny vidiny ianao dia afaka manao pirinty 100/200 / 300copies ihany koa. Azontsika atao ny manolotra santionany namboarina ihany koa, fa tsy maimaim-poana.
Ho an'ireo te hamoaka boky, misy ny fomba fanontana maro samihafa. Ny famoahana boky vaovao dia mety ho dingana mahatahotra, ary mety ho sarotra ny mamantatra hoe iza no fomba fanontana tsara indrindra amin'ny tanjonao. Na izany aza, ny fahatakarana ny soa sy ny fomban'ny dingana samihafa dia hanampy anao hampiakatra ny tombotsoanao.
Ny fomba fanontana malaza ho an'ny mpanoratra vaovao dia ny fanaovana pirinty fohy. Ity dingana ity dia mila boky vitsivitsy tsy maintsy arahana raha ampitahaina amin'ny fomba hafa. Ity karazana fanontam-pirinty ity dia mazàna atao amin'ny fomba nomerika fa tsy amin'ny gazety an-tsokosoko lehibe.
1) Mampihena ny fako
Ity endrika famokarana ity dia mamokatra boky lavitra noho ny fomba hafa, koa raha vitsy ny boky novidina fa tsy ny andrasana, dia vitsy ny boky ho lany. Midika koa izany fa vitsy ny boky azon'ny mpanoratra atao amin'ny fizarana sy hizara azy.
2) Tsipika kely kokoa
Io no fomba tokana handraisan'ny mpanoratra ny boky vitsy. Ka raha kopia vitsivitsy ihany no ilaina, izany no fomba mora indrindra hahazoana azy ireo. Raha mitsahatra mila kopia bebe kokoa ianao dia afaka mandefa fanontana fotsiny.
1) Ny sarany mpiorina kokoa
Raha mila boky be dia be ianao, dia tokony mitady fomba hafa ianao noho ny fanontana fohy, satria ho lafo kokoa. Raha ampitahaina amin'ny fanaovana pirinty offset, ny isan'ny boky, avo kokoa ny vidiny.
2) Ny sarany mpiorina kokoa
Previous: Mametraka tahiry ny boky haingo
Manaraka: Famoahana Gazety A4 Custom Wholesale